सगरमाथा चढेको झूटो दाबी गर्ने भारतीय दम्पती महाराष्ट्र प्रहरीको कारबाहीमा
सगरमाथा चढ्ने सबैभन्दा पहिलो भारतीय दम्पती भएको दाबी गर्ने भारतीय जोडी। तस्बिर : बीबीसी
भारत । सगरमाथा चढ्ने सबैभन्दा पहिलो भारतीय दम्पती भएको दाबी गर्ने एक भारतीय जोडीलाई भारतको प्रहरीले निलम्बन गरेको छ । दिनेश र ताराकेशरी राठौरले गत वर्ष आठ हजार आठ सय ४८ मिटर अग्लो सगरमाथा सफलताका साथ चढेको दाबी गरेका थिए । तर सोमबार महाराष्ट्रको प्रहरीले भने २३ मेमा उनीहरुले सगरमाथा चढेको तस्बिरलाई झूटो रहेको निश्चित गर्दै जागिरबाट हटाएको हो ।
उक्त दम्पतीले सगरमाथा चढेको दाबीसहित तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएका थिए । उनीहरुको दाबीमाथि अन्य आरोहीहरुले समेत प्रश्न गरेपछि उनीहरुले तस्बिर सम्पादन गरी सगरमाथा चढेजस्तो बनाएको खुलेको थियो । एडिसनल कमिसनर साहेब्राओ पाटिलले पीटीआई न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले गलत सूचना प्रवाह गर्दै महाराष्ट्र प्रहरीको बदनाम गरेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपि उनीहरुमाथि कस्तो कारबाही हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।
उनीहरुमाथि नेपालले यसअघि नै १० वर्षसम्म कुनै पनि हिमाल आरोहणमा यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सर्वप्रथम उनीहरुले सगरमाथा चढेको प्रमाणीकरण गरे पनि अनुसन्धानपछि प्रमाणीकरण फिर्ता लिएको थियो । उनीहरुले भने उक्त तस्बिर साँचो रहेको मिडियालाई बताउँदै आएका थिए । पर्वतारोहण नेपालको प्रमुख पर्यटन स्रोत हो । २५० विदेशीसहित ४५० भन्दा धेरै मानिसले गत वर्ष सगरमाथा चढेका थिए । यसअघि २०१५ को भूकम्पपश्चात् पर्वतारोहण केही समयसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
बीबीसी न्युजबाट ।
मैले चढ्नुअघि सोचेको 'छि ! सगरमाथा' र चढेपछि देखेको 'वाह ! सगरमाथा' !
मात्र दुई हप्ताअघि म विश्वकै छानोमा उभिइरहेको थिएँ, बढाइचढाइँ गरेर भने पनि वा सत्य बोले पनि । हो, म ८ हजार ८ सय ४८ मिटर माथि सगरमाथाको चुचुरोमा थिएँ ।
“बुहारीले सगरमाथामा उक्लियौँ भन्दा मन सिरिङ भयो”
काठमाडौँ । “बुहारीले माथि उक्लियौँ भन्दा मन सिरिङ भएको थियो, केही भयो भने यो सानो नातिको के होला भनेर चिन्ता लाग्योे ।” पत्रकार बुहारी कल्पना महर्जनसहित प्रथम महिला पत्रकार सगरमाथा आरोहण २०१८ को
काठमाडौँ / एघारौ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले कीर्तिमानी आरोही तथा आरोहण क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई आज सम्मान गरेको छ । आरोहणमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपाल माउन्टेनरिक इन्स्ट्रक्टर
सोलुखुम्बु / सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ । सगरमाथा आरोहण समूहले नियमको पालना नगर्दा सगरमाथा आधार शिविरमाथि शिविर २ र ३ मा फोहोरको मात्रा अत्याधिक बढेको छ ।